सांसद शाहीको दुखेसोः सभामुख महोदय ! मैले जाने कहाँ ? — Breaking News, Headlines & Multimedia
सांसद शाहीको दुखेसोः सभामुख महोदय ! मैले जाने कहाँ ?
कोरपाटी संवाददातामाघ १६, २०७८सुर्खेत
१६ माघ २०७८, आइतबार
राप्रपा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सोशिला शाही आज बैठक सञ्चालन भएकै अवस्थामा सभाहलबाट बाहिरिनु भयो । प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको तेस्रो बैठकको क्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ बाहिरिनुभएको हो ।
उहाँले बैठकको शुरुमा आपत्ति जनाएपनि त्यही समय लिँदै नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले करिब ४० मिनेट बोलिरहँदा सदस्य शाही त्यतिञ्जेल सभामा उभिरहनुभयो । जब नेता कँडेलले धारणा राखेर सक्नुभयो त्यसपछि सभामुख शाहीले के होला माननीय सदस्य ? छोटोमा कुरा राख्नुहोला भनेर उहाँलाई समय दिनुभयो ।
करिब ४० मिनेट सभामा उभिनुभएकी सदस्य शाहीले गहकिएर भन्नुभयो, “सभामुख महोदय ! हाम्रो दलले स्थान पाउने कि नपाउने ? सभामा सबै दलको मान्यता त्यही त होला नि ? प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको व्यवस्था मिलेन कि ? मलाई बारम्बार सिट कै लागि मरिहत्ते गरेजस्तो किन गरिँदैछ ? मैले पनि कुनै न कुनै धारणा राख्ने वातावरण तयार गर्नुपथ्र्यो कि ? कर्णाली प्रदेशका निमुखा जनताले सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दलको धारणा सुन्न पाउनु पर्यो नि ?”
कर्णालीमा विकास, समृद्धि भएन भन्ने कुरा उठेपनि विकास कति भयो भएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन दश जिल्लाको जनताले गरेको उहाँले बताउनुभयो । सानो दलले विश्वासको मत दिँदा सत्तापक्ष र नदिँदा अर्को पार्टीको भयो भन्ने कुन सोच राखिन्छ भने सभामुख महोदय ! मैले जाने कहाँ ? प्रश्न गर्दै सदस्य शाहीले भन्नुभयो, “कि गेटबाटै फर्कनु पर्ने हो ? दलको मान्यता दिएपछि त्यही अनुसार सिटको पनि त व्यवस्था हुनु पर्यो । अब म यत्तिकैमा जान्छु र सिटको व्यवस्था होस् ।”
अब बैठक आउन पाइए आउला, नआउन पाइए नआउँला, मेरो आवश्यकता भए बोलाउनु होला नभए नबोलाउनु होला । चार दलले कर्णालीको विकास गर्नु, मैले घुमाएर रिंगाएर कुरा गर्न जानेको छैन भन्दै उहाँ बैठकबाट बाहिरिनुभयो । त्यसपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भएको सूचना गर्नुभएको थियो ।